Location: Mbido » Ịdee » WTN » Otu netwọk njem nlegharị anya ụwa ọhụrụ VP maka mmekọrịta gọọmentị
Alain St.Ange, onye isi WTN
Ọtụtụ ndị ozi nke njem nlegharị anya n'ụwa maara nke ọma na World Tourism Network na netwọọdụ echiche nrụgharị njem ya a ma ama.
Dị ka nke taa ndị ozi ma ọ bụ ndị ode akwụkwọ njem nlegharị anya n'ụwa nwere onye raara onwe ya nye, onye bụbu onye ozi ibe nke mba dabere na njem nlegharị anya ga-atụgharị na WTN.
Network Njem Nleta Ụwa, ụlọ nke iwughachi njem ghọtara mkpa ọ dị maka ọha na eze na nkeonwe ịhazi na nkwurịta okwu.
Njem nlegharị anya bụ ụlọ ọrụ nke nghọta mba ụwa na udo, ihe abụọ dị mkpa karịsịa maka taa.
Ọtụtụ ndị nọ ọdụ na ndị bụbu minista njem nlegharị anya abụrụla akụkụ nke netwọk njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-eto eto.
Netwọk njem nlegharị anya nke ụwa abụghị ọgbakọ ndị otu ọdịnala, kama ọ bụ echiche zuru ụwa ọnụ nke nwere usoro mpaghara na mpaghara nke ndị mmekọ.
Ebe ọ bụ na ọrịa ahụ wakporo ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, World Tourism Network guzobe onwe ya dị ka olu mbụ na olu ọhụrụ maka obere azụmaahịa na obere ọkara ma ọ bụ ndị ọrụ nkwekọrịta nọọrọ onwe ha.
Ebumnuche World Tourism Network bụ iwepụta ego maka ndị mmekọ ya. Igosipụta nkwụsi ike n'iche ihu ọrịa na-aga n'ihu, ilekwasị anya na nchekwa, nchekwa, na visibiliti bụ ihe ejiri mara World Tourism Network.
Taa, World Tourism Network họpụtara Alain St. Ange ka ọ bụrụ osote onye isi oche mbụ maka mmekọrịta gọọmentị (ọha na ọha).
Maazị St. Ange bụ onye ama ama n'ụwa niile na onye ndu nwere ma ọtụtụ ahụmịhe mpaghara na nke zuru ụwa ọnụ. Ọ na-arụ ọrụ ma na nzuzo na ọha ubi. Maazị St.Ange sitere na Republic of Seychelles, mba agwaetiti Africa dabere na njem nlegharị anya dị n'Oké Osimiri India.
Mgbe o duchara ụlọ ezumike okomoko nke ọma na Seychelles, Mr. St. Ange ghọrọ onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ Ndi Njem nleta nke Seychelles tupu onye isi ala Seychelles họpụtara ya dị ka onye ozi mbụ nke njem nlegharị anya, ụgbọ elu ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, na agha mmiri na obodo a.
O wetara Seychelles na maapụ. Nkwagharị ya n'ime igbe ịkpọ ndị Carnival mba ụwa n'agwaetiti ya bụ nnukwu ihe ịga nke ọma.
St. Ange na-ekwukarị, sị: “Seychelles bụ enyi mmadụ nile, ọ dịghịkwa ndị iro nke onye ọ bụla.” Tupu ọrịa a na-efe efe, Seychelles kagburu ihe niile chọrọ visa maka mba dị iche iche.
Maazị St. Ange bụ onye na-azọ ọkwa onyeisiala maka obodo agwaetiti ya. Ọ bụkwa onye na-azọ ọkwa odeakwụkwọ ukwu UNWTO. Ugbu a ọ bụ odeakwụkwọ ukwu nke FORSEAA otu nzukọ azụmaahịa ASEAN. Ọ gbara arụkwaghịm na ngalaba na-ahụ maka njem nlegharị anya Africa dịka onye isi ala nso nso a.
Juergen Steinmetz, onye nchoputa, na onye isi oche nke WTN kwuru:
"Anyị dị mpako na anyị nwere obi ụtọ na Mr. St.Ange na-ahụ maka mgbasa ozi anyị, imekọ ihe ọnụ na ndị ọrụ ọha. Mazị St. Ange ọ bụghị naanị nwere ahụmịhe, mana ụdị mmadụ iji were Network Tourism Network gaa n'ọkwa ọzọ.
Echetara m mgbe Minista mba ofesi na Seychelles gwara m na na mba ya, Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya bụ onye kacha mkpa na ndị isi oche.
Juergen Steinmetz & Alain St. Ange na nnabata IIPT na Lusaka, Zambia
Maazị St. Ange kwuru:
"Enwere m ekele na nkwanye ùgwù n'ezie na a kpọrọ m ka m bụrụ onye isi oche mbụ maka ihe gbasara ọha na eze maka Network Njem Nleta Ụwa. Nke a bụ njem nlegharị anya, ụlọ ọrụ na-aga nke ọma naanị mgbe ị jiri obi gị rụọ ọrụ na ya ma nọgide na-enwe mmasị na ihe niile ị na-eme maka ụlọ ọrụ ahụ. "
Enwere m obi ụtọ na m jere ozi dị ka onye nhazi na onye isi oche nke African Tourism Board (ATB) na m na-atụ anya ime World Tourism Network (WTN) ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ nkeonwe / ọha na eze nke dị mkpa taa.
Enwere etiti dị mkpa n'etiti gọọmentị dị ka ndị omebe iwu na ndị otu n'ihu ụlọ ọrụ, na-eje ozi na mpaghara nzuzo mgbe ọ bụla.
O doro anya na mkparịta ụka na ọrụ m ga-elekwasị anya na mkpa ọ dị iso ndị ọrụ ọha na eze na-arụkọ ọrụ n'ụwa nile iji weta ogwe aka nkwado maka ịzụ ahịa ụlọ ọrụ nkeonwe."
Na-adịbeghị anya gbara arụkwaghịm na Ndị njem nleta n'Africa, St. Ange kwadoro na 2018 yana Juergen Steinmetz, Dr. Peter Tarlow, onye isi oche nke WTN, na Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO, ọrụ ọhụrụ a na WTN enweelarị ntọala St. Ange na-etinye maka ya. ọtụtụ afọ.
Ternyaahụ, na Network Njem Nleta Ụwa họpụtara Dr. Walter Mzembi ka ọ bụrụ onye isi oche ya maka WTN Africa. Mzembi tinyere Steinmetz, St. Ange bụkwa onye isi oche na bọọdụ njem nlegharị anya Africa.
Nhọpụta ndị ọzọ maka ndị isi mpaghara nke World Tourism Network na-abịa. Na St. Ange, atụmatụ mpaghara dị otú ahụ kwesịrị ịbịakọta ọnụ ma ghọọ ohere zuru ụwa ọnụ nke mmekọrịta n'etiti ọha na eze na ndị ọrụ nzuzo.
Ndepụta nke St. Ange maka 2022 a mara ọkwa na adreesị afọ ọhụrụ ya.
N'ịtọ ntọala ya na Machị 2020 na Berlin, Germany, World Tourism Network toro ka ọ bụrụ nzukọ nke ihe karịrị ndị mmekọ 1000 na mba 128.
ASEAN Government Seychelles Tourism WTN
Ejidere ndị njem nlegharị anya Dutch ka ha mechara ekele ndị Nazi na Auschwitz
Red Ginseng na-ebelata ike ọgwụgwụ na nchekasị
Nke mbụ, a ghaghị iji gas Africa mee ihe n'Africa
Nkwalite ọhụrụ maka mgbu azụ ala
Ndị nwe oke Air Canada na-ahọpụta ndị isi ọhụrụ
Ihe nrịbama ọrịa imeju abụba, biopsy imeju, na...
Ndị njem ndị Juu na-ebo Lufthansa ebubo na ọ na-emegide ndị Juu
Ihe ngosi Bahamas na Sun Sentinel Prime Expo nnukwu…
Economy, Business, ma ọ bụ Klas ọdịmma ọhụrụ anyị?
Kedu ihe ọ ga-ewe maka obodo ka ọ bụrụ ihe na-adịgide adịgide?
Isi okwu mbụ sitere na Hyatt Hotel ka mpụta mpụta n'oge okpomọkụ a
Ike na-ewuli elu nke njem nlegharị anya: ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ "40 Maka 40 ...
Seychelles na Club Med jikọrọ ọnụ na nrara nke ọma…
Jeju Air na-agba mbọ maka ụgbọ elu na ụzọ ọhụrụ na-aga Guam
Aṅụ mmanụ aṅụ na-ebelata nwere ike ịpụta obere mkpụrụ osisi
Ugbu a ọ bụ mpụ maka ụgbọ elu Russia ọ bụla ịbanye UK ...
ICCA kagburu mmemme na mmemme niile na Russia